တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဌာနအကြီးအကဲ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန၀န်ကြီး H.E. Mr. Song Tao နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး | cincds
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ - ၉
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဌာနအကြီးအကဲ နိုင်ငံတကာ ရေးရာဌာန၀န်ကြီး H.E. Mr. Song Tao နှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဌာနဧည့်ခန်းမ၌တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ်တင့်ဆန်းတို့တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဌာနအကြီးအကဲ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန၀န်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယ ၀န်ကြီး Mr. Guoye Zhou တို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ဌာနအကြီးအကဲ နိုင်ငံတကာရေး ရာဌာန၀န်ကြီးက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ယခုကဲ့သို့ တရုတ်နိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်လာရောက်ခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ကိုများစွာအထောက် အကူပြုပါကြောင်းနှင့် ကြိုဆိုပါကြောင်းပြောကြားသည်။ ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုခိုင်မာစေရန်အတွက် ယခုကဲ့သို့ချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် ပါတီအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များအပြန်အလှန် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပိုမိုတိုး တက်ကောင်းမွန်စေကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှ တစ်ဆင့် မြန်မာ နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာမှုရှိစေရေးအတွက် တပ်မတော်မှပါဝင် ကူညီ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းပြီး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်ရရှိစေလိုသည့်စေတနာဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တပ်မတော်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေမှစ၍ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲပေးထားသည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူများမှရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီုမိုကရေစီလမ်း ကြောင်းပေါ်လျှောက်နေချိန်၌ နိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ လုံခြုံရေးအရတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများရှိမှသာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မည့်အခြေအနေများနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား အဆင့်လိုက်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင် ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဌာန နိုင်ငံတကာရေးရာ ဌာန၀န်ကြီးက နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံသည်။ နေ့လယ်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေးဌာနအကြီးအကဲတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီ၊ နိုငျငံခွားဆကျဆံရေးဌာနအကွီးအကဲ နိုငျငံတကာရေးရာဌာနဝနျကွီး H.E. Mr. Song Tao နှငျ့ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေး
နပွေညျတျော၊ ဧပွီ - ၉
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီ၊ နိုငျငံခွားဆကျဆံရေးဌာနအကွီးအကဲ နိုငျငံတကာ ရေးရာဌာနဝနျကွီး H.E. Mr. Song Tao နှငျ့ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီ၊ နိုငျငံခွားဆကျဆံရေးဌာနဧညျ့ခနျးမ၌တှဆေုံ့ဆှေးနှေးသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦးနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးသဈလငျးအုနျး၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊ လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျတငျ့ဆနျးတို့တကျရောကျကွပွီး တရုတျကှနျမွူနဈ ပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီ၊ နိုငျငံခွားဆကျဆံရေးဌာနအကွီးအကဲ နိုငျငံတကာရေးရာဌာနဝနျကွီးနှငျ့အတူ ဒုတိယ ဝနျကွီး Mr. Guoye Zhou တို့တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျတရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီ၊ နိုငျငံခွားဆကျဆံရေး ဌာနအကွီးအကဲ နိုငျငံတကာရေး ရာဌာနဝနျကွီးက တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ယခုကဲ့သို့ တရုတျနိုငျငံသို့ခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျလာရောကျခွငျးသညျ နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှု ကိုမြားစှာအထောကျ အကူပွုပါကွောငျးနှငျ့ ကွိုဆိုပါကွောငျးပွောကွားသညျ။ ထို့နောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှုပိုမိုခိုငျမာစရေနျအတှကျ ယခုကဲ့သို့ခဈြကွညျရေးခရီး လာရောကျခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ထို့အတူ နှဈနိုငျငံအစိုးရ၊ တပျမတျောနှငျ့ ပါတီအဖှဲ့အစညျးမြားမှလညျး ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြားအပွနျအလှနျ လညျပတျခွငျးဖွငျ့ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကို ပိုမိုတိုး တကျကောငျးမှနျစကွေောငျး ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားမှ တဈဆငျ့ မွနျမာ နိုငျငံဖှံ့ ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ နှဈနိုငျငံအကြိုးစီးပှားကိုဖျောဆောငျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျနှငျ့ ဒီမိုကရစေီစနဈ ခိုငျမာမှုရှိစရေေးအတှကျ တပျမတျောမှပါဝငျ ကူညီ ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ရရှိရနျအတှကျ တရုတျနိုငျငံမှ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးလကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြား ခြုပျငွိမျးပွီး ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးကို အမှနျတကယျရရှိစလေိုသညျ့စတေနာဖွငျ့ နှဈပေါငျး ၇၀ ကြျောအတှငျး ပထမဆုံး အကွိမျအဖွဈ တပျမတျောမှ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၂၁ ရကျနမှေစ၍ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲပေးထားသညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ပွညျသူမြားမှရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံဒီုမိုကရစေီလမျး ကွောငျးပျေါလြှောကျနခြေိနျ၌ နိုငျငံရေးအရတညျငွိမျအေးခမျြးမှု၊ လုံခွုံရေးအရတညျငွိမျအေးခမျြးမှုမြားရှိမှသာ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျမညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား အဆငျ့လိုကျခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျ ခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားအား တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီ၊ နိုငျငံခွားဆကျဆံရေးဌာန နိုငျငံတကာရေးရာ ဌာနဝနျကွီးက နလေ့ယျစာဖွငျ့ တညျခငျး ဧညျ့ခံသညျ။ နလေ့ယျစာသုံးဆောငျအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီ၊ နိုငျငံခွား ဆကျဆံရေးဌာနအကွီးအကဲတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျ ပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျခဲ့ကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။